Baolina kitra - Ekipam-pirenena :: Any Frantsa ny fampivondronana voalohany • AoRaha
Baolina kitra – Ekipam-pirenena Any Frantsa ny fampivondronana voalohany
Efa vonona hiatrika ny fampivondronana voalohany mialoha ny fanombohan’ny dingana famaranana amin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika na ny CAN 2019, hatao any Ejipta, ireo mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy na ny Barea. Amin’ny 29 mey ho avy izao any Frantsa io fampivondrona voalohany io.
Manaraka avy eo ireo lalao ara-pirahalahiana sady ho fitsapana sy fanamafisana ny fahaiza-miaraka eo amin’ ireo mpilalao rehetra.
Hisantatra ireo lalao am-pirahalahiana amin’ny Barea i Luxembourg ny 2 jona ao amin’ ny kianja Josy Barthel. “Efa vonona tsara daholo ireo mpilalao. I Zotsara ihany no naratra ka tsy afaka hanohy intsony. Efa milamina ny momba an’i Dax izay hanolo azy. Ankoatra izay, efa vonona avokoa ireo mpilalao”, araka ny voalazan- dRakotozanany Hervé , tompon’ andraikitry ny serasera ao amin’ny komity ho an’ny fandrindrana ny raharahan’ ny baolina kitra.
Mitohy any Paris indray ny fampivondronana mialoha ny lalaom-pirahalahiana faharoa. Hifandona amin’ny Harambee Stars, avy any Kenya, ny ekipam- pirenena malagasy, amin’ny 7 jona. Higadona eto an-toerana izy ireo ka manohy ny fanazaran- tena manomboka ny 8 jona. Io fiomanana io no hanomanana ny lalao fahatelo any Maraoka ny 15 jona.
Milaza ny hamoaka ny lisitra ofisialy ahitana an’ireo mpilalao handrafitra ny Barea ny komity amin’ny faran’ity herinandro ity na amin’ny herinandro ambony farafaha- tarany. “Mbola tsy nivoaka ofisialy ny lisitra. Tsy fantatra, araka izany, na ho ampiana arakany nangatahan’ny komity ny isan’ireo mpilalao telo amby roapolo amin’izao”, hoy kosa ny fanazavan’i Jean François Debon, tale teknika nasionaly eo anivon’izany komity ho an’ny fandrindrana ny raharahan’ny baolina kitra izany.
Adin-kiragasy mitety faritra :: Maherin’ny roanjato ny sehatra atrehan’ny tarika Raintelo isan-taona
Fitsipika vaovaon’ny fifamoivoizana :: Mety hiafara amin’ny figadrana ny fandikan-dalàna ataon’ny mpamily